I-MFASetup - Umhlahlandlela Wokuqinisekisa we-Microsoft Multi-Factor - Ungakwenza Kanjani
I-MFASetup - Umhlahlandlela Wokuqinisekisa we-Microsoft Multi-Factor
Siphila ezweni elihlala likhula ngobukhulu bedijithali. Namuhla sesinayo cishe yonke idatha yethu ku-intanethi. Konke kubonga ukukhululeka kwamadivayisi ahlakaniphile nekhompiyutha yamafu ukuthi umhlaba wethu wonke uzungeze i-inthanethi. Ngenkathi i-intanethi isilethela izinzuzo eziningi kangaka, inezinkinga zokuphepha eziyingozi ngokulinganayo.
Kunezindlela eziningi kakhulu zabaduni noma abantu abafuna ukulimaza. Isizathu sokwephulwa kwezokuphepha noma ukugenca asinakubalwa. Kungaba ukukugenca futhi uthole yonke imininingwane yakho. Ngaphandle kweGoogle, iMicrosoft iyinkundla evame kakhulu, cishe wonke umuntu emhlabeni uyayisebenzisa.
Sonke sine-ID ye-Microsoft futhi ama-PC ethu ayisebenzisa ngokuyinhloko, ikakhulukazi uma sine-Windows 10. Ukuqinisa ukuphepha kwakho, iMicrosoft yethule ubuqiniso beMulti-factor. Lo mhlahlandlela uhlose ukukusiza ufunde konke mayelana nohlelo, ulusebenzise, ​​nokuthi lusizo kanjani. Ngakho-ke ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale!
Isici sokufakazela ubuqiniso bezinto eziningi umzamo weMicrosoft wokuqinisa ubuwena nokufinyelela kwakho endaweni yesikhulumi. Ikucela ukuthi uqinisekise noma nini lapho ungena ngemvume kusuka kudivayisi entsha noma ngesiphequluli sewebhu. Ukuqinisekiswa kwe-Multi-factor nakho kusetshenziswa ngokugqamile yiGoogle, futhi cishe yonke insizakalo eku-inthanethi iyifaka kancane kancane. Kubaluleke kakhulu ngemuva kwezigameko eziningana ezisekelweni zamafu, njenge-'The Man In The Cloud. '
Imihlahlandlela eminingi yeMicrosoftcraft:
Setha i-Xbox usebenzisa i-aka.ms/xboxsetup
Lungisa Iphutha le-aka.ms/remoteconnect
Uyini Umuntu Emafini?
Eyaziwa nangokuthi iMiTC, kungumzamo wokugenca wokulahlekelwa ukufinyelela kwabo ku-ID ngaphandle kokunikeza iziqinisekiso. Umhlaseli udinga ukufinyelela kwesinyathelo esisodwa nge-PC. Uma unokuphepha okukodwa kunoma iyiphi ipulatifomu efana ne-Google, i-Facebook, noma enye iwebhusayithi, umhlaseli angangena kalula kuyo bese engena.
Ngakho-ke, ukufakazela ubuqiniso be-Multi-factor kusebenzisa ukuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili esikhundleni sesinye ukuqinisekisa ukuthi ungumnikazi we-ID ongena ngemvume. Ngakho-ke, yandisa ezokuphepha, futhi ngale ndlela esebenza kahle, iMiTC iba mancane amathuba okuba. Vele, lokhu akuyona ukuphela kwenjabulo iMFA ekulethela yona. Iphinde iqinise ukuphepha kwakho konke.
Kusebenza Kanjani Ukufakazelwa Kweziqinisekiso Eziningi?
Kunezindlela ezintathu esebenza ngazo futhi unikeze ukuphepha okungcono. Noma kunjalo, indlela ngayinye ihlanganisa okuthile okwaziyo nokuthile onakho. Isibonelo, uyazi i-ID yakho ne-password yakho, futhi unenombolo yocingo ebhalisiwe ongayithumela kuyo i-One-time-password. Funda ngokuqhubekayo ukuze uqonde kangcono:
Le ndlela isebenza kahle ngokusebenzisa inombolo yakho ebhalisiwe noma ehambisanayo ne-Akhawunti ye-Microsoft. Uma ususebenzise le ndlela, noma kunini lapho ungena ngemvume kusuka kudivayisi entsha noma isiphequluli, uzothola ikhodi yokuqinisekisa (iphasiwedi yesikhathi esisodwa) ngeSMS noma ikholi ezokuvumela ukuthi ungene.
Izokucela ukuthi ungene ngemvume, ulandele
Izokubuza indlela yokufakazela ubuqiniso, khetha ubuqiniso befoni
Bese ufaka izwe lakho nenombolo yeselula
Kuzoba nenketho yokuthola ikhodi ngomyalezo wombhalo
Lapho ucindezela okulandelayo, kuzokucela ukuthi uqinisekise inombolo ngokuthumela i-OTP kunombolo oyinikiwe
Faka ikhodi, bese ulungele ukuhamba
Isaziso Sokuqinisekisa i-Push:
Le ndlela ikuvumela ukuthi usebenzise uhlelo lwakho lokusebenza ukunikeza imvume yokungena ngemvume ye-ID. Imvamisa iba nenkinobho ecindezelayo ekubuza ukuthi ngabe uzama ukungena ngemvume. Uma uqinisekisa, i-ID izothola imvume yokungena. Lesi sinyathelo sidinga ukuthi ube ne-smartphone noma ithebhulethi enohlelo lokusebenza olusemthethweni lokuqinisekisa lweMicrosoft.
Vakashela iwebhusayithi yokusetha
Okwamanje khetha uhlelo lokusebenza lweselula kunketho
Bese ukhetha inketho yokuthola isaziso
Inkinobho entsha yokusetha izovela nekhodi ye-QR
Manje kuzodingeka ulande i-Microsoft Authenticator esemthethweni esitolo sokudlala ku-smartphone noma ithebhulethi yakho
Bese ungena kuhlelo lokusebenza ngokulandela inqubo ejwayelekile
Lapho usufake i-akhawunti, izocela imvume yekhamera ukuvula ikhodi ye-QR
Funda ikhodi ye-QR, futhi ulungele ukuhamba
Inqubo esele isetshenzisiwe
Ukugunyazwa Kokuvula Lokusebenza:
Lesi sinyathelo sihlanganisa ikhodi yokuqinisekisa i-Push kanye nekhodi yokuqinisekisa. Izolandela inqubo yokwenza kusebenze i-Push-authentication, kepha izoveza ikhodi yokuqinisekisa. Ikhodi ishintsha njalo ngemizuzwana engama-30, futhi kuwumqondo omuhle ukuyisebenzisa uma ufinyelela i-ID yakho kwinethiwekhi yomphakathi. Ngenye indlela, kuyindlela enhle uma usendaweni enokuxhumeka kwenethiwekhi okungekuhle.
Ngabe i-Biometric Futhi Ukufakazelwa ubuqiniso?
Yebo, kuyindlela yesithathu ngaphandle kwalokhu okwaziyo nalokho onakho. I-Bio-metric futhi iyindlela ephephile yokufinyelela noma yiluphi uhlelo lokusebenza noma iwebhusayithi. Izinhlelo zokusebenza eziningi ze-smartphone ziyisebenzisela ukukunikeza ukufinyelela okusheshayo kwipulatifomu ngaphandle kokudinga ubuqiniso ngaso sonke isikhathi. Yonga isikhathi njengoba imvamisa iyindlela esheshayo. Kodwa-ke, ukunciphisa ubungozi, kungcono ukwenza kusebenze izinhlobo ezahlukahlukene zezinketho zokuqinisekisa.
Kungani Kufanele Uthole Ukwenza kusebenze kwe-MFA?
Uma uvame ukusebenzisa i-smartphone yakho noma i-ID yomsebenzi ukugcina ukugcinwa kwedokhumenti okubalulekile nokudlulisa, udinga ukwenza le nqubo isebenze. Ngokufanayo, izinhlangano eziningi zinikezela nge-ID yomsebenzi ehlukile kubasebenzi bazo, futhi uma abasebenzi bengenakho lokhu kuqinisekiswa kwezinto eziningi kusebenze, isigebengu singakwazi ukwephula. Abasebenzisi bomuntu uqobo abasengozini encane, kepha uma unemininingwane ehlukahlukene enjengolwazi lwezezimali (ikhadi lesikweletu, ukugunyazwa kwasebhange, njll.), Kubaluleke kakhulu kuwe ukusebenzisa iMFA. Njengebhonasi, ingangeza ukuphepha noma ngabe awunanani eliningi.
Yilokho kuphela odinga ukukwazi ngezinyathelo ezifanele zeMicrosoft zokukusiza ukukhulisa ukuphepha kwakho. Siyethemba ukuthi le ndatshana icacisa noma ikuphi ukungabaza. I-MFAsetup iyatholakala kuwo wonke umuntu, hhayi inhlangano kuphela. Ngakho-ke, wonke umuntu kufanele asebenzise lobu buchwepheshe obuqhakazile.
Ngokwengeziwe, kungakuhle uma uhlolisise ukuqinisekiswa kwe-MFA noma okuyizinyathelo ezimbili kwezinye izinhlelo zokusebenza namapulatifomu ukuqinisa ukuphepha kwakho. Izwe ledijithali libucayi, futhi iphutha elilodwa lingaholela ekulahlekelweni okungaqondakali. Sebenzisa izindlela ezinhle kakhulu futhi usebenzise njalo imithombo ethembekile neqinisekisiwe yanoma yini.
Umhlahlandlela Wokunikezela nge-RAM Engaphezulu ku-Minecraft
Imibono emihle kakhulu yesikhumba se-Minecraft (2020)
Ungawalanda kanjani amavidiyo we-Twitter nama-Gifs?
amawebhusayithi ahamba phambili ku-inthanethi
nikeza inkumbulo eyengeziwe ku-minecraft
I-netflix isayina isivivinyo samahhala
bukela uchungechunge lokusakazwa ku-inthanethi, ezokuzijabulisa
i-youtube to mp3 audio converter
bukela i-tv bukhoma bukhoma mahhala ku-inthanethi
thenga ukufinyelela kwe-robux engu-25